Nsogbu, Oké Ifufe | Network Meteorology
Nacho Morató | | Meteorology
Site na nwata Agụwo m ihu igwe na oké ifufe na-akpali mmasị m. Echetara m mgbe m hụrụ Twister na nke mbụ ya, ihe nkiri ebe ha nọ 😉 nke ọma n'ihi na echetara m ịhụ ndị ahụ buuru ụgbọ ala kama ịgbara ọsọ, ha gara dị ka akụ dị n'akụkụ etiti oke mmiri ozuzo ahụ. Kedu ihe mere oke ifufe ji ejidekarị ndị nwara ịgbapụ mana ọ bụghị ndị ga-achụ nta ya? Ọ bụ otu n'ime ihe amaghị ama nke sinima.
M ga-ekiri ihe nkiri ahụ wee chee, Achọrọ m ịbụ dinta oké ifufe. Maka umuaka choro ka ha buru ndi dibia bekee, ndi oku oku na ndi astronauts. Ugbu a ha chọsiri ike ịbụ ndị ọrụ obodo, mana onweghị onye chọrọ ịbụ onye ọkà mmụta ihe ochie dị ka Indiana Jones ma ọ bụ ọkà mmụta ihu igwe na-ebu amụma banyere oke ọdachi nke ụwa. Gaa na anya oke ifufe, gbapụ na ugwu na-agbawa agbawa, buo amụma banyere Tsunami ma ọ bụ ala ọma jijiji dị oke oke. Ọ bụkwa ihe ihere, ịhụnanya adịkwaghị.
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị alaghachi na ndụ n'ezie? Enwere ndị oké ifufe na-efe? Kedu ihe ha na-eme, gịnị ka ha mụrụ? ebe m nwere ike ịhụ ha?Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m chọrọ ịbụ ezigbo dinta ịchụ mmiri ozuzo? Na Spain anyị enweghị oke ifufe ma ọ bụ oke mmiri ozuzo nke oke nke ndị America, ọ bụ ezie na anyị nwere ezigbo ifufe iji mụọ. Dị ka ị ga-ahụ, ọ bụghị ihe niile na-etinye ndụ gị n'ihe ize ndụ iru anya nke ajọ ifufe a. Amụma, data data na-arụ ọrụ dị oke mkpa bụ isi nke ọtụtụ n'ime nsogbu ndị oké ifufe.
1 Ndị na-achụ nta n'oké mmiri na ndụ n'ezie
1.1 Ndị dinta ama ama
2 Tornado ebe na oge
3 Foto na vidiyo nke oke ifufe.
4 Etu ị ga-esi bụrụ onye na-amụ gbasara ihu igwe na Spen
Ndị na-achụ nta n'oké mmiri na ndụ n'ezie
Onwere “mmadu nzuzu” ole na ole na-agbaba n’okporo igwe nke ugbo ala ha dika na fim, mana enwere ufodu. Ndị mmadụ dị ka Warren faidley, 'Ọpụrụiche' na nlanarị ọdachi. Ma ọ bụ ndị otu sitere na usoro Discovery, Storm Chasers, nke 3 nwụrụ na nso nso a. Maka na ndụ n'ezie, ọ bụrụ na ị gaa F5 ị nwere ike ịnwụ.
Ndị dinta ama ama
Onye mbụ amatara na oké ifufe bụ David hoadley. Ọ malitere ịchụ nta oké ifufe na North Dakota na 1956 ọ bụ onye mbụ jiri ya mee ihe n'usoro ọdụ ihu igwe na ọdụ ụgbọ elu. Maka ihe a niile, a na-ahụta ya dị ka onye ọsụ ụzọ na ọzụzụ a ma bụrụ onye guzobere Storm Track magazine, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Na 1972 Mahadum Oklahoma tinyere NSSL (National Labour Storms Laboratory) bidoro Project to Intercept Tornadoes, nke bụ ụlọ ọrụ izizi ebumnuche ịchụ nta. Site na ebe a, ọrụ ahụ malitere ịmasị nke ọma na magazin, mbipụta, ihe nkiri na usoro Channel Discovery na-adịbeghị anya
Onye na-achị achị
Ahapụrụ m vidiyo nke masịrị m, nke ụfọdụ ndị oké ifufe na-esochi oké ifufe Joplin nke ụdị EF5
"Untingchụ nta" oké ifufe pụtara ịkwọga ọtụtụ puku kilomita, n'oge ọ bụla, na itinye ndụ gị n'ihe egwu. Ọ dịghị nkịtị. Ọ bụ ezie na site na nke a, nrọ m nke nwata ga-apụ n'anya
Ndị ọzọ na-achụ nta bụ ezigbo ndị na-anụ ihu igweIkekwe freaks n'okwu ahụ ma ọ bụ ndị nkịtị, ndị na-ese foto, ndị ọkà mmụta sayensị, ndị injinia, ndị na-amụ gbasara ihu igwe, ma ọ bụ ndị na-amakarị na-etinye ndụ ha n'ịmụ na ikiri oke ifufe. Ọtụtụ raara onwe ha nye amụma na ndị ọzọ nyocha nke data enwetara. Na njedebe, oké ifufe na-achụrụ ndị ọzọ ọ enjoyụ, oké ifufe. A tonado bụ nnọọ ike ịhụ, ọ dị ka icing na achicha, ma ole na ole nwere ike ịnya isi na-ahụ ya na obere nke na-agbalị na-eso ya.
Tornado ebe na oge
Oge kachasị oge maka oke ifufe bụ na Mee na June na nnukwu ala ndị America na karịa kpọmkwem na mpaghara (nnukwu ebe) a na-akpọ Tornado wara wara na nke ahụ na-elekwasị anya na Texas, Oklahoma, Kansas na Nebraska
Foto na vidiyo nke oke ifufe.
Lee ị nwere nnukwu anụ ọhịa (Isi mmalite Gabriel galaz)
Kemgbe ụwa ha kwuru okwu ugbu a ihe gbawara agbawa cyclogenesisEchere m na oké ifufe nke ihe ndị a na-abịa, ịhụ ihe dị ka nke a ga-abụ ezigbo nrọ, ọ bụ ezie ee, n'etiti okike nke na-anaghị akpata ihe ma ọ bụ mmebi onwe onye nye ndị mmadụ.
Etu ị ga-esi bụrụ onye na-amụ gbasara ihu igwe na Spen
Nwere ike ịbụ onye na-amu amu ma ọ bụ bịaruo ụwa nke meteorology nso, na ọmụmụ ihe "gọọmentị". Iji bụrụ ọkà mmụta ihu igwe na Spen, tupu ị mụọ sayensị nke anụ ahụ ma nwee ọpụrụiche na ihu igwe, ọ bụ ezie na enweghị aha ọrụ. Na Spain enweghị ọrụ nke ọrụ a. Ugbu a ị nwere ike ịnweta
Ma ọ dịghị ihe dị mma kọwaa karịa na Maldonado's blog ???
Mahadum, n’enyeghi aha ndi n’ahu maka onodu ubochi. Nwere ike ịme ya naanị, dịka iwu nke World Meteorological Organisation siri guzobe, Statelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe nke steeti nke nwere ndị isi atọ, chọrọ ogo dị iche iche ịhọrọ, site na mmegide, na ebe akpọrọ na BOE maka ịbanye otu ihe.
1) Superior Corps nke State Meteorologists (Degree: Dọkịta ma ọ bụ gụsịrị akwụkwọ, Architect ma ọ bụ Superior Engineer).
2) State Meteorology Diploma Corps (Asambodo: Mahadum diplọma, injinia ma ọ bụ teknụzụ teknụzụ, Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ nke Atọ ma ọ bụ otu).
3) State Meteorology Observer Corps (Asambodo: Higher Bachelor, Second Degree Professional Training ma ọ bụ otu).
Ana m elekwasị anya na nke mbụ n'ihi ohere. Ndị mmegide nwere mmemme ndị a:
a) Ederede edegara ajuju ajuju ajuju nke usoro ihe banyere Physics, Meteorology and Climatology.
b) Mkpebi edere banyere nsogbu metụtara agbata.
c) Mkpebi mmega ahụ bara uru gbasara ọnọdụ ihu igwe na / ma ọ bụ ihu igwe.
d) Ntinye ọnụ na nnọkọ ihu ọha nke ndekọ ọzụzụ ọzụzụ.
e) Inyocha ule ederede na ederede n'asụsụ Bekee (mmanye) na ndị mba ọzọ ndị ọzọ na asụsụ obodo (nhọrọ).
Na ebe a anyị na-ahapụ nyocha nke ọrụ a na ọ bụghị ọtụtụ ọdịnihu, ọ bụ ezie na ọ mara mma nke ukwuu. Ana m ekwu banyere oke ifufe, ọ bụghị ịbụ ọkà mmụta ihu igwe, n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Oké Ifufe. Achọrọ m ịbụ oké ifufe chaser
Enwere m mmasị n'echiche ịchụso oké ifufe, site na oge mbụ m lere mmemme na tv banyere ọrụ a, amaara m na nke ahụ bụ ihe m chọrọ ime na m ga-achọ iso gị soro.
Zaghachi Jaime alejandro
Lucas Hayes kwuru dijo
Enwere m mmasị na ihe ọ bụla metụtara ihe okike, ebe m bụ nwata m na-achọ mgbe niile ịbụ onye na-agbagha ọgba aghara, taa m dị afọ 20 ma enweghị m ike imezu nrọ ahụ. Kedu ihe m na-atụ ụjọ nke oke egbe M dị njikere na njikere n'ihi na ọ bụ ihe m omiiko banyere
Zaghachi Lucas Hayes
Gịnị bụ ala ọma jijiji na otu esi atụ ya?